Kedu ihe bụ TPE?
Ugbua ihe eji eme TPE ka eji ya rụọ ọrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị, enwere ike ichọpụtakwa na ngwaahịa TPE ji nke nta nke nta bụrụ ihe dị mkpa na ndụ anyị, yabụ kedu ihe akụrụngwa tpe? Kedu ka esi arụ ọrụ TPE? Site na nke a ịghọta:
TPE (Thermoplastic Elastomer) bụ ụdị ihe elastomer thermoplastic. O nwere njirimara nke ike dị elu, nkwụsi ike dị elu, usoro ịkpụzi ọgwụ, nchedo gburugburu ebe obibi, nke na-adịghị egbu egbu na nchekwa, ọtụtụ ike, ezigbo agba agba, mmetụ dị nro, nguzogide ihu igwe, ike ọgwụgwụ na nrụgide okpomọkụ, arụmọrụ dị elu, enweghị mkpa vulcanization, nwere ike itighachi iji belata akwụ ụgwọ, ọ nwere ike ịbụ abụọ-shot injection ịkpụzi, ntekwasa na eyi, Pee, PC, PS, ABS na ndị ọzọ na matriks ihe, ma ọ bụ ọ nwere ike kpụrụ iche.
Enwere ike iji TPE na ngwaahịa ụmụaka, akụrụngwa ahụike, ngwaahịa ndị dị elu, wdg. Dị ka pacifiers nwa, usoro ọgwụgwọ infusion, klọb golf, wdg, kamakwa o kwesịrị maka mmepụta nke akụrụngwa akụrụngwa.
Uru nke TPE ihe onwunwe:
TPE nwere ike ijikọta ya na ebu maka ịkpụzi ọgwụ, na-ewepu ojiji nke mgbakwunye dị ka gluu, nke mere na ihe ndị si mba ọzọ anaghị emetụta ya, yabụ enweghị isi pụrụ iche na enweghị mgbakasị ahụ mmadụ. Maka ezinụlọ ndị nwere ụmụ nwanyị dị ime na ụmụ ọhụrụ, ngwaahịa TPE na nchekwa dị mma dịkwa oke mkpa.
TPE bụ ugbu a bụ ihe a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi mara mma nke ụwa, yana ngwaahịa TPE na-anọ n'ọkwá dị elu na ahịa na-eweta akpaaka Europe na America. Ya mere, anyị na-eji ihe TPE na ngwaahịa anyị.
E jiri ya tụnyere ọdịnala ụgbọ ala akpụkpọ anụ mechiri emechi nke ukwuu na-eji splicing na njikọ mmepụta teknụzụ, PEgbọ ala ụgbọ ala TPE nwere ike ịmalite usoro ịkpụzi ọgwụ na-arụ ọrụ nke ebu. Usoro nhazi ahụ na-ewepụ ihe mgbakwunye dị ka gluu na formaldehyde, nke mere na ihe ndị ọzọ anaghị emetụta TPE akụrụngwa, ọ nweghịkwa isi pụrụ iche. A na-emepụta ihe ndị na-emerụ ahụ ma ghara ịkwalite ahụ mmadụ, na-eme ka ihe mgbochi ụgbọ ala dịkwuo gburugburu ebe obibi ma dịgide adịgide.
Ngwongwo TPE nwere ezigbo nguzogide mmiri. Enwere ike ịsacha ya na mmiri maka nlekọta na-adaba adaba.Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nsogbu nke ụgbọ ala akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke a na-apụghị ịsacha, enwere ike iji akwa mmiri na-asa TPE ụgbọ ala ozugbo. ụgbọ ala mgbe akpọnwụchara. Ọ dịkwa mma karị ilekọta.
Agbọ ala Deao nwekwara obere akụkụ pụrụ iche dị elu ma nwee usoro ntụgharị, nke nwere ike ichebe suede n'ime ụgbọ ala ma gbochie nsị mmiri ka ọ wụpụ n'ụgbọala.
Ihe dị n'elu bụ iwebata ihe akụrụngwa TPE bụ. Inghụ ebe a, anyị nwere ike ịghọta nghọta nke ihe ọkụkụ TPE na ụfọdụ njirimara ha, yabụ anyị nwekwara ike ịghọta atụmanya sara mbara nke ngwaahịa TPE.